Archive du 20201008
Eddy boaderozy Hivoaka an’i Tsiafahy ?
Tsy misy fampiakarana azo atao intsony amin’ny ankapobeny ny didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana mpandrava didy (Cour de cassation) voalaza manafoana ny didy manameloka 5 taona an-tranomaizina ho an’i Maminirina Jean Eddy na Eddy Boaderozy, izay mifonja eny Tsiafahy amin’izao fotoana araka ny voalazan’ny fampahalalam-baovao iray omaly.
Antenimierandoholona Tratry ny fahirano, tsy misy vola iasana
Ny vola tokony hoentina mampandeha ny raharaha tsy misy, kanefa ny fivoriana ara-potoana afaka roa herinandro.
Serge Zafimahova “Ny HCC no manome vahana ny tany tsy tan-dalàna”
Ny HCC no tena mametraka ny tany tan-dalàna amin’ny fitsipi-dalao fanajana ny lalàmpanorenana, kanefa ny HCC no voalohany tsy manaja izany, hoy Atoa Serge Zafimahova Mpandrindra ny vovonana Dinike omaly,
Vidin’ny tsangan-tànana Hitohy ny fitakian’ny depiote fiara « 4x4 »
Ny 20 oktobra 2020, talata fahatelo amin’ny volana amin’ity volana ity no hiditra amin’ny fivoriana ara-potoana faharoa ny parlemanta, araka ny voafaritry ny lalàmpanorenana ao amin’ny andininy faha-75.
Federasionin’ny gadra politika Nihaona tamin’i Rivo Rakotovao
Nihaona tamin’ny Filohan’ny Antenimierandolona Atoa Rivo Rakotovao ny solontenan’ireo Mpikambana ao anatin’ny FEDEP na ny Federasionin’ny gadra politika ny talata 06 oktobra.
Kianjan’ny Demokrasia Ho lasa Kianja Zafy Albert
Ny 14 oktobra izao izany no hanokanan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tsangam-bato tandindona hoenti-mametraka ny anaran’ny Kianjan’ny Demokrasia hitondra ny anaran’ny Pr Zafy Albert.
Depoite Jean Michel Henri Nanao vava be momba an-dRajaonarimampianina
Ny 06 oktobra teo no nanamafisan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao fa efa vita sonian’ny fitondrana Rajaonarimampianina tamin’ny 2017 ny famatsiam-bola 235 tapitrisa euros hanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 mankany Tolagnaro sy ny lalam-pirenena faha- 5 tapany A avy eo Ambanja.
Solontenan` ny mponina any Tsihombe Mandà ny fanaratsiana ny depiote Masy Goulamaly
Nazava ny fanambaran’ireo solontenan’ny mponina avy amin’ny fokontany maromaro sy ny kaominina sasany any amin’ny distrikan’i Tsihombe, omaly.
Rodobe sy vovonan’ny mpanohitra “Mangetaheta sy miantso anay ny vahoaka”
Tafatsangana ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara any amin’ny distrikan’Arivonimamo, hoy ny fampitam-baovaon’ireo isany nitarika delegasionina tany an-toerana, Mihari-Ni-Rencho. Isan’ny nahafinaritra ny nahitana ny antoko politika MFM tao anatin’izany,
Vovonana Antsiva Mangataka ny fanendrena ny governoran`i Melaky
Manamafy ny fanambarana nataony isaky ny faritra momba ny fanendrena governoram-paritra ny Vovonana Antsiva (Plateforme de base pour l'appui et soutien au développement).
Fiatrehana ny fiovaovan` ny toetr’andro Ampidirina anatin` ny drafim-pampandrosoana
Tafio-drivotra mahery, hafanana mahery vaika, tsy fahampian-drano sy ny maro hafa. Efa tsapa sy iainana ankehitriny ny vokatry ny fiovan’ny toetrandro.
Fifaninanana ho mpandraharahan’ny fonja Nahemotra mialohan’ny faran’ny novambra
Nahemotra mialohan’ny faran’ny volana novambra izao indray ny fifaninanana hidirana eny amin’ny sekoly ambony ho mpandraharahan’ny fonja na ENAP.
Jiro tapatapaka Vokatry ny toetr’andro hoy ny JIRAMA
Maro ireo faritra miaina fahatapahan-jiro matetika eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao.
Paul Rabary “Ampianaro hifehy ny tontolo manodidina azy ny zaza ”
Manoloana ny dian’ny minisiteran’ny fampianarana ankehitriny izay hita ho mizotra any amin’ny fanafoanana ny fanadinam-panjakana CEPE sy mifanandrify amin’ny tetikasa PSE an’ny fitondrana teo aloha dia naneho ny heviny ny minisitry ny fanabeazana teo aloha sady mpahay fiarahamonina, Paul Rabary.
Asa sy tetikasam-panjakana Sarona ireo mpisoloky avo lenta roa
Tra-tehaky ny Polisim-pirenena ny olona roa voalaza fa tompondaka amin’ny fisolokiana avo lenta.
Barean’i Madagasikara Afaka hihazo an’i Maraoka i Carolus sy Amada
Tonga tany Luxembourg omaly namonjy ireo namany i Nomenjanahary Lalaina na i Bolida Mpilalaon’ny Barea.
Mety ho marina amin’ny ampahany betsaka tokoa ireo zava-boalazan-drizareo avy eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina omaly mikasika ny
Analakely Nitokona ireo Taxi moto
Nitokona sy nanao hetsika fanairana nanoloana ny lapan’ny tanànan’Analakely omaly ireo mpitondra taxi moto marobe eto Antananarivo sy ny manodidina. 70 isa teo ho eo izy ireo raha kely manohitra ny fanagiazan’ny kaominina Antananarivo renivohitra ny moton’ny naman’izy
By Pass Alasora Maty nodomin’ny kamiao ilay mpitondra bisikileta
Nisehoana lozam-pifamoivoizana nahafatesana lehilahy iray teny amin'ny Bypass omaly 07 oktobra tokony ho tamin'ny 8 ora sy sasany maraina.
Taxi-moto sy taxi tsy manara-dalàna Mihamafy ny hazalambon’ny CUA
Niroso tamin’ny fidinana ifotony sy fisavana ny ekipan’ny sampan-draharaha misahana ny fitaterana eto anivon’ny CUA, niaraka tamin’ny komity stratejikan’ny taxi.
Karatra Visa Mvola Natao hanamora ny fiainana
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Telma Ankorondrano ny andinindininy mikasika ilay tolotra vaovaon’ity orinasa ity dia ny “carte bancaire Visa Mvola”. Iny omaly iny ihany koa moa no fotoana nivoahany tamin’ny fomba ofisialy.
Resaka hira mamoafady Lasa adihevitra tsy hifankahitana
Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nantsoiny ny Tale Jeneraly roa eo anivon’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina Francis Razafiarison miandraikitra ny kolontsaina sy Fetra Rakotondrasaoava Tale Jeneralin’ny serasera mpisolo toerana.
Filatsahana an’elon’aina Hanofana ny tafika ny orinasa Skydive
Hisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena sy ny orinasa Skydive, tarihin'Andriamatoa Laurent Lesquereux, mpampiofana amin'ny filatsahana an'elon'aina izay nizara ny traik'efa ananany teny amin'ny 1er RFI farany teo.
Andohatapenaka Tratra ireo nangalatra bisikiletan’ny namany
Lehilahy miisa roa nanosika bisikileta nitsofoka niazo an’Ankasina no saron’ny polisy nanao fisafoana teny Andohatapenaka Lalambaovao ny 06 oktobra lasa teo tokony ho tamin’ny 02 ora maraina.
Asan-dahalo any Ambato Boeny Lavon’ny miaramila i Dodony
Ny 05 oktobra lasa teo dia nisehoana halatra omby tao amin`ny distrikan' Ambato Boeny.
Fanafihana mitam-piadiana Tratra ihany Rabetsy ny farany
Jiolahy iray antsoina hoe : « Rabetsy » no voasambotra tany Antsirabe tamin’ny 05 Oktobra lasa teo.
Tontolon’ny fambolena Nanome tohana 824 677 ny FIDA
Nahazo tohana 824 677 dolara Amerikanina avy amin’ny FIDA (Fond Intérnational de Développement Agricole) I Madagasikara, tafiditra ao anatin’ny fanohanana ny RPSF (Relance en Faveur des Populations Rurales Pauvres),
Fanatsarana fanjonoana ao Nosy be Mpanjono madinika miisa 1500 no miatrika fiofanana
Ao anatin’ny fanampian’ny tetikasa SWIOFish 2, ny fitantanana momba ny varotra sy ny fampiroboroboana ny vokatra an-dranomasina sy an-dranomamy dia nirotsaka amin’ny fanampiana ireo mpanjono madinika,
Coronavirus Mitombo ny tranga eto Analamanga
Iray teto amin’ny Faritra Analamanga no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, nampiakatra ny isan’ny lavo hatrizay ho 235, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta. 33 ny tranga vaovao, azo tamin’ny fitiliana 338, manome taham-pahavoazana 9,76%.